अध्ययन गर्न विदेश गएका बैज्ञानिक उतै लुकेर बस्छन् – Krishionline
अध्ययन गर्न विदेश गएका बैज्ञानिक उतै लुकेर बस्छन्
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले वास्तविक रुपमा कृषि क्षेत्रको लागि गर्नु पर्ने दायित्व अर्थात अनुसन्धानको काम पछिल्लो समय गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आईरहेको छ । परिषद् राजनीतिक अखडाको रुपमा विकसित हुँदै गईरहेकाले पनि सो संस्थाको औचित्य नभएको भन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
परिषद्का अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री स्वयं पनि नार्कले गरेको कार्यप्रति सन्तोष व्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन र त बेला बेलामा अहिलेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको खारेज गर्दा पनि फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिने गर्दछन् । के परिषद्ले काम नै गर्न नसकेको हो त ? यसै विषयमा परिषद्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा टेकबहादुर गुरुङ्गसँग वैकुण्ठ भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
० पछिल्लो समयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले अनुसन्धानका कुनै पनि काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
नेपालमा धेरै सरकारी संघसंस्थाहरु छन् ती सवैको तुलनामा गर्ने हो भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई काम नै गर्ने संस्था हो भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाई छ । धेरै नै काम गरिरहेका छौं अर्थतन्त्रमा पनि यसले बीउ विजन उत्पादन गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यत्तिमात्र नभई गाई, माछा लगायत पशुबस्तुको नश्ल सुधारमा पनि धेरै योगदान पु¥याएको छ । त्यसैले नार्कले केही गरेन अनुसन्धान नै गरेन भन्नु हुँदै न ।
० तर नार्कले जुन रुपले अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन भन्ने त हो नि ?
सवै हात गोडा बाँधेर लडाइँदिने अनि काम गरेन भन्नु त्यत्ति न्याय संगत भए की । कसैसँगै केही अपेक्षा गरिन्छ भने उसलाई खुल्ला छाडिदिनु पर्दछ, उसलाई काम गर्ने माहौल दिनु पर्दछ, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । ती आवश्यकता पूरा गरिसकेपछि काम गरेन भने आरोप लगाउनु ठिक हो । तर अहिले नार्कलाई राज्यले नै वेवास्ता गरेको देखिन्छ । दुई अर्व चौतिस करोड रुपैयाँ बजेट दिएर राज्यको सम्पूर्ण समस्या नार्कले नै गर्नु पर्दछ भन्ने जस्तो तर्क अलि उचित हुँदैन कि ।
० नार्कको अध्यक्ष समेत रहनु भएका कृषि मन्त्रीले यो संस्थाको औचित्य नभएको भन्नु हुन्छ नि त ?
त्यो मन्त्रीको व्यक्तिगत कुरा होला । उहाँलाई पनि केही समस्या होलान् । नार्कमा पनि धेरै समस्या छन् । प्राविधिक समस्या, प्रशासनिक समस्या यी समस्या समाधान गर्नका लागि १६ सदस्यीय परिषद् छ । त्यो अंग चल्नै सकेन ।
० किन चल्न सकेन त ?
यो चल्न नसक्नुको एउटा कारण भनेको नयाँ संविधानले लेखेको नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद् हो भन्ने भावका साथ कतिपय मनोनयन भएर आउनु पर्ने सदस्यहरु आउन सक्नु भएको छैन । जति पनि स्थायी सदस्यहरुसँगको वैठक नै बस्न नसकेका कारण चल्न नसकेको हो ।
० परिषद्को वैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन किन होला ?
परिषद्मा पूर्ण सदस्य मनोनय हुन नसकेका कारण वैठक बस्न नसकेको हो ।
० नार्क स्वायत्त संस्था देखिएको भएपनि कृषि विकास मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेका कारण पनि समन्वय हुँदैन भन्ने कुरा चाहि के हो ?
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री संस्थाको अध्यक्ष भएका कारण हामीवीच विवाद छ भन्ने कुरा मान्न नै सकिन्न । उहाँले जे निर्णय गर्नु हुन्छ त्यही नै कार्यान्वयन गर्ने हो । बाहिर जे कुरा आएको भएपनि मन्त्रीले नार्कका लागि सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँकै निर्देशन अनुरुप हामीले कार्य गरिरहेका छौं । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने परिषद् बस्न नसकेका कारण केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकिरहेका छैनन ।
० यहाँ आफै बैज्ञानिक जो कोहीले पनि वा मन्त्री स्वयंले नार्क काम छैन भन्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
नार्कमा भएका समस्या, बैज्ञानिकहरुको पलायनको अवस्थाले गर्दा देशको समग्र कृषि अवस्था विग्रँदै गरेका कारण अहिलेको अधिकार विहिन नार्क होइन शक्तिशाली सुदृढ कृषि अनुसन्धान परिषद् चाहिन्छ भन्ने आशयले मन्त्रीले त्यसो भन्न खोजेको हो भन्ने लाग्दछ मलाई । उहाँले शसक्त अनुसन्धान परिषद् देख्ने चाहना राख्नु भएको हो अरु केही होइन ।
० विगत दश बर्षको अवस्था हेर्ने हो भने कृषि अनुसन्धान परिषद् राजनीति अखडाका रुपमा विकसित हुँदै गयो भन्ने आरोप छ सवैले लगाई रहेका छन् ?
जजसले त्यस्तो देख्नु भएको छ त्यो गलत देख्नु भयो भनेर म भन्न चाहन्न । तर कृषि अनुसन्धान परिषद् मात्र किन कुन चाहि संस्थामा राजनीतिकरण भएको छैन त्यो पनि भन्नु प¥यो नि । अरु संस्थाहरुको भन्दा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा कम राजनीति भएको छ । अहिले हामीसँग बैज्ञानिकहरु छैनन् । करीव दुई हजार वैज्ञानिक पु¥याउनु पर्दछ भन्ने कुरा त मन्त्रीले गर्नु भएको छ ।
० मन्त्रीले दुई हजार बैज्ञानिक पु¥याउने भनेको भएता पनि विद्यमान बैज्ञानिकहरु हाजिर गर्ने अनि अन्यत्र गएर कन्सल्ट्याण्ट हुने काम त भईरहेको छ ?
विगतदेखि त्यस्तो परम्परा थियो भन्ने मैले सुनेको पनि हो । तर म आएपछि कुनै पनि बैज्ञानिकलाई त्यस्तो अनुमति दिएको छैन । सरकारले सेवा सुविधा बृद्धि गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि बैज्ञानिकहरुलाई बाहिर गएर काम गर्नु भन्दा यही बसेर देखिन काम गर्नका लागि मैले आग्रह पनि गरेको छु ।
० नार्कबाट अध्ययन गर्न गएका वैज्ञानिकहरु विदेशमा नै लुकेर बसे भन्ने कुरा पनि छ नि त ?
त्यस्तो होइन, हामी १८ सय २३ जना कर्मचारी मध्ये ४/५ जना बैज्ञानिकहरु नफर्केका हुन् । प्रया गएका फर्केका छन् । पारिवारिक समस्या वा अन्य समस्याका कारण पनि विदेश भासिनु पर्ने वाध्यता भएको होला । यहाँका मात्र होइन अन्य कार्यालयबाट विदेश अध्ययन गर्न गएका कर्मचारीहरु पनि फर्केका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा कृषि प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयन होला ?
टीकापुर नगरपालिकाले गाई–भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने
किसानको तरकारी बजारमा पु¥याउन समस्या
युरिया किन्दा डिएपी अनिवार्यले किसान मारमा
कृषि विभागमा धर्ना बसेका कृषि प्राविधिकहरु पक्राउ